Ukuchazwa kweVisa ye-ETIAS kuchaziwe
Ekuqaleni kuka-2021, uninzi lwabahambi oluya eYurophu ngoku olungadingi maxwebhu okundwendwela ukuze batyelele kuya kufuneka bafumane i-visa ye-visa ye-ETIAS ngaphambi kokuba bangene kwindawo yeSchengen. Olu xwebhu kulula ukulufumana kwaye akufuneki lubeke isampampu kuzo naziphi na izicwangciso zokuhamba. Nantsi into ekufuneka iindwendwe ziyazi ngale nkqubo intsha.
Kutheni le nto iNkqubo ye-ETIAS isetyenziswa?
I-ETIAS ayisiyi-visa kodwa, endaweni yoko, irhoxiso lwevisa. Ivumela iYurophu ukuba ihlolwe abahambi ngaphambi kokuba bafike ukuze banqabe ukungena kubantu ababonwa njengemingcipheko yokhuseleko. Ikwavumela ukuba bazi ukuba ngabaphi na abantu basemzini abakuloo ndawo xa kunokwenzeka ukuba kubekho intlekele kwaye kufuneka bazi ukuba ngubani onokuchaphazeleka.
Ukurhoxiswa kwe-visa ye-ETIAS kuyilelwe ukugcina abagibeli kunye nabemi bekhuselekile. Urhulumente wase-Yuropu unethemba lokunciphisa inani labanqolobi kunye noxinzelelo lwezopolitiko ukuze abantu bazive bekhululekile xa besiya apho.
I-EU kunye ne-ETIAS
I-ETIAS yiprojekthi eyaqala nge-European Union, nangona kukho amazwe ambalwa kwindawo yeSchengen eya kuyidinga kodwa engeyonxalenye ye-EU. Ezi yiIceland, iLichtenstein, iNorway neSweden. Ngokufanayo, amazwe ambalwa e-EU akayidingi i-ETIAS, kubandakanya neRiphabhlikhi yaseIreland, iRomania, iBulgaria, iCroatia, kunye neCyprus.
Inkqubo yokurhoxisa i-visa ye-ETIAS iyimodeli emva kwezinye iinkqubo ezikhoyo ngoku e-Australia nase-United States. I-EU iyilele ukuba icofe abahambi abanokuba yingozi okanye abanokungena kuloo ndawo bekhohlisa. Ngokungabavumeli ukuba bangene, urhulumente unethemba lokubuthintela ubunqolobi, izidubedube zezopolitiko, kunye nezinye izinto ezinokuba sisisongelo ebantwini nakwipropathi.
Ngelixa ukufaka isicelo sokurhoxisa i-visa kunokuziva ngathi linyathelo elingafunekiyo, urhulumente we-EU uwuthathe njengeyona ndlela yokunyanzelisa imida yawo kunye nokugcina wonke umntu ekhuselekile kangangoko.
Ummandla weSchengen kunye ne-ETIAS
Indawo yaseSchengen yindawo eseYurophu apho kuvunyelwe ukuhamba ngokungenamda. La mazwe alawulwa ngokwahlukeneyo kodwa avumela abantu ukuba bahambe phakathi kwabo ngaphandle kokufuna ukukhangelwa kwepasipoti okanye ii-visa ezahlukileyo. Oku kunciphisa iindleko zolawulo lwemida kwaye kwenza ukuba kube lula kubantu ukuba benze ishishini kwaye babone izinto.
Ukurhoxiswa kwempepha zokundwendwela ze-ETIAS kuyakukhusela yonke le ndawo. Nje ukuba bangene ngaphakathi kuyo, abahambi baya kuba nakho ukuhamba ngokukhululekileyo, ngaphandle kokukhathazeka malunga nokufumana imvume yokutyelela ilizwe ngalinye ngokwahlukeneyo. Baza kukwazi ukuhlala ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90 ngexesha kwaye ukurhoxiswa kwabo kuya kusebenza iminyaka emithathu okanye kude kuphele ipasipoti yabo yangoku.
Abahambi banokufaka izicelo ze-ETIAS yabo kwaye bayifumane ngokukhawuleza ukuze kungafuneki batshintshe izicwangciso zokuhamba okanye bakhathazeke ngohambo lwabo. Endaweni yoko, banokuziva bekhuselekile besazi ukuba abanye abahambi bahlolwe, nabo.